विश्व थाईराईड दिवसः “समयमा उपचार गरे जटिल बन्दैन थाइराईड” – Click Khabar
बुधबार, जेठ ११, २०७९ | १५:३०:५३ |
चितवनः समयमै उपचार गरे थाइराईड रोग जटिल नबन्ने चिकित्सक बताउँछन् । यो रोगको अध्ययन अनुसन्धानसँगै उपचारमा सक्रिय इण्डोक्राइनोलोजिष्ट डा. सौरभ खतिवडा थाइराईड सम्बन्धी रोग लागेमा आत्तीनु नपर्ने तर समयमा सही उपचार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो “समयमा उपचार गरेर थाइराईडलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ।” भारतको नयाँदिल्लीस्थित एम्स्बाट इण्डोक्राइनोलोजिमा डिएम गर्नुभएका खतिवडा कुनै खानेकुराले थाइराइड बनाउने नभई शरीरको एन्टीबडीका कारणले हुने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “ थाइराईड कुनै भाइरल इन्फेक्सनपछि दुख्ने हुन्छ । कुनै जेनेटिक कारणले हुन्छ । थाइराईडको परीक्षण र उपचार पद्धति राम्रोसँग विकास भएको छ ।”
चितवन मेडिकल कलेजमा कार्यरत खतिवडा थाइराईडका कारण क्यान्सर नै भए पनि यसले मानिसको आयु नघटाउने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “थाइराइडका अरु समस्या त झनै सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम गर्नुपर्छ । औषधि आफै खान बन्द गर्नु हुँदैन । खानपान चिकित्सकले भनेमा मात्रै बार्ने गर्नुहोला ।”
उहाँले थाइराईडका बिरामीले खानेकुरा बार्नु नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समयसँगै थाइराईड सम्बन्धी रोग परिवर्तन भएको बताउँदै भन्नुभयो “ अहिले थाइराईड हर्माेन घट्ने वा बढ्ने शरीरको एन्टीबडीका कारणले हुने गर्दछ । त्यसकारण कुनै खानेकुराका कारण हुने होइन ” चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधि सेवन गर्नु नै उत्तम उपाय भएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँका अनुसार घाँटीको अगाडि तलपट्टी हुने सानो ग्रन्थिलाई थाइराईड भनिन्छ । यसमा दुई वटा भाग हुन्छन् । यसले शरीरलाई आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण हर्माेन उत्पादन गर्दछ । यो हर्माेन हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै महत्वपूर्ण छ । यो हर्माेनले बच्चाको दिमागको बृद्धि विकासदेखि बयस्क मानिसमा काम गर्ने जाँगर, स्फूर्ति, मुटुको कामका लागि, खाना पचाउने, शरीरको मोटोपनलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
थाइराईड हर्माेन कमी वा बढी भएमा फरक फरक लक्षण देखिने डा. खतिवडा बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “थाइराईडमा कहिलेकाहीं ट्यूमर पनि पलाउँछ । ट्यूमरहरु मध्येमा सबैभन्दा सजिलै उपचार गर्न सकिने भनेको थाइराईडको ट्यूमर हो । यस्तो ट्यूमरको उपचार गर्दा बिरामीको आयु पनि घट्दैन ।”
साधारणतया मानिसहरुलाई थाइराईड हर्माेन घट्दा थकाई लाग्ने, कसैकसैलाई खुट्टा सुन्निने, अनुहार फुस्रो हुने, कपाल झर्ने जस्ता लक्षण देखिने उहाँ बताउनुहुन्छ । यस्तै बढ्दा आत्तिने, हात काप्ने, मुटु ढुकढुक हुने, गर्मी धेरै महसुस हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
थाईराईडको उपचार तीन किसिमले गरिने उहाँको भनाई छ । एउटा औषधिको सेवन, दोस्रोमा झोल औषधिको प्रयोग गरेर ग्रन्थी सुकाउने र तेस्रो शल्यक्रिया गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । तर पछिल्लो समय शल्यक्रियाभन्दा झोल औषधिको प्रयोग गरेर सुकाउने विधि धेरै प्रयोगमा आउने गरेको उहाँको भनाई छ ।
घाँटी दुख्दैमा थाइराईड नहुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो “घाँटी दुखेमा कहिलेकाहीं मात्रै थाइराईड हुन सक्छ । त्यसैले घाँटी दुख्दा भेट्ने भनेको नाक, कान घाँटी विशेषज्ञ चिकित्सकलाई हो ।” कहिलेकाहीं थाइराइडबाट क्यान्सरमा परिणत हुन सक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो “घाँटीमा गाँठागुँठी जस्ता लाग्यो भने त्यसको अल्ट्रासाउण्ड गरेर क्यान्सर हो होइन, पत्ता लगाउँछौं । कहिलेकाहीं ट्स्युको परीक्षण गरेर पनि क्यान्सर पत्ता लगाउँछौं ।” क्यान्सर पहिचान भयो भने पनि शल्यक्रिया र रेडियोथेरापी गरेर सजिलै निको पार्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
थाइराइड भएको बिरामीले के खान हुन्छ, के खानु हुँदैन भन्ने धेरैलाई जिज्ञासा हुने उहाँको अनुभव छ । उहाँले भन्नुभयो “समयसँग थाइराईड सम्बन्धी रोग परिवर्तन भएको छ । पहिला पहिलो गलगाँडको धेरै समस्या हुन्थ्यो, त्यो समयमा काउली, बन्दा, तरुल लगायतका तरकारी कम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चलन आएको थियो ।” पछिल्लो समय थाइराईड हर्माेन घट्ने वा बढ्ने शरीरको एन्टीबडीका कारणले हुने भन्दै उहाँले कुनै खानेकुराका कारण थाईराईड नहुने बताउनुभयो ।